Maya Magazine: January 2016
ဂျော့ဇီရတ်၏ ဓါတ်ပုံကဗျာများ ရေးသူ - နေဦးဝေ
ရေးသူ - နေဦးဝေ
မူလဆုံမှတ်- အနုပညာအယ်လ်ဘမ် ၂ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ) စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
ဂျော့ဇီရတ် George Szirte သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ် TS Eliot Prize စာပေဆုကို Reel ကဗျာစာအုပ်ဖြင့် ရရှိထားသူ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် New and Selected Poems စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့လေသည်။ ယခု ကဗျာများမှာ ၂၀၀၈ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် Poetry အမေရိကန် မဂ္ဂဇင်းတွင် ဓါတ်ပုံများနှင့်တကွ ပါရှိသော ကဗျာများ ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းကဗျာများမှာ လန်ဒန်မြို့ ဘာဘီကန် ခန်းမတွင် ပြသော ၂၀ ရာစု ဓါတ်ပုံဆရာများ၏ 'သမိုင်းစာမျက်နှာများမှ' ဟုပင် အမည်တပ်၍ စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေထားပါသည်။ ကဗျာများကိုလည်း သီးသန့် အမည်မတပ်ပဲ သက်ဆိုင်ရာ ဓါတ်ပုံဆရာ ပေးသော အမည်အတိုင်း ခေါင်းစဉ်ပေးခဲ့လေသည်။
စိတ်ကူးရုပ်သွင် တဒင်္ဂ မိုးသဲသဲရွာပြီဆိုရင်လည်း ရောက်လာတတ်
ဗုံးတွေ ဒလစပ်ကြဲပြီဆိုရင်လည်း ရောက်လာတတ်
မြို့ကြီးရဲ့ ဥယျာဉ်ကို လွင့်စင်သွားအောင် နှာချေပစ်လိုက်တဲ့
အနုမြူဗုံးတလုံး ကွဲပြီဆိုရင်လည်း ရောက်လာတတ်။
နောက်တော့ အမှောင်ထုက အလှည့်စောင့်နေတဲ့ လှေကြီးတစင်း ဆိုက်လာသလို
လက်ဖဝါးတွေကို ဖြန့်ပြီး ဖုန်မှုန့်တွေကို ဖူးကနဲ မှုတ်ပစ်လိုက်စမ်းပါ
ကျောက်ခဲတလုံးကို ကောက်ပြီး အားရပါးရ ပစ်ထည့်လိုက်စမ်းပါ။
အလင်းရဲ့ ပြီးပြည့်စုံမှုအလား ဝိုင်းစက်လာတဲ့အထိ
ပါးစပ်ကို အားကုန်ဖွင့်ပြီး ဟစ်ကြွေးလိုက်စမ်းပါ။
လေးကန်ကန်ညထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ အဲဒီသစ်ပင်ကလေးက
မလုပ်ကောင်းမှန်း သိပေမယ့် အကြည့်တွေကို
တခုတည်းသော ကြယ်ဝါကြီးဆီကိုပဲ ပို့လွှတ်နေမိ။
ခါးကိုင်းနေတဲ့ ဦးထုပ်နဲ့အဖိုးကြီးတွေ၊ မနှစ်မြို့မှုနဲ့ ရှုံ့မဲ့နေတဲ့ အဖွားအို
မျက်စိကို စုံမှိတ်ရင်း ပါးတွေ ခွက်ဝင်သွားခဲ့။
စက္ကူပေါ်မှာ မီးလောင်ပေါက်တောင် ဖြစ်လာရဲ့။
သူတို့ဘာကြောင့် အခုလို အံကြိတ် အရှုံးပေးခဲ့ကြသလဲ
စောကြောအဖြေရှာဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ဘယ်လိုမှ လက်လှမ်းမမီခဲ့။
အကုန်လောင်ကျွမ်းတဲ့အထိ ဒီအတိုင်း လွှတ်ပေးလိုက်မိ။
ရော့စ်၏ ဂျူးရပ်ကွက်မှ ကလေးငယ်များ
မြေပြင်အဖု အထစ်ပေါ်မှာ အပြေးပြိုင်ကြ
ကျုပ်တို့ရဲ့ မူလဘူတ အလှကျက်သရေဖြစ်တဲ့
ခွန်အားတွေ လျှင်မြန်မှုတွေ ဖူးယောင်ကွဲပြဲမှုတွေကို
လဲကြ၊ ကွဲကြ၊ ရှုံးကြ၊ မဲကြ။
ရေရှည်ခံ ခြေရာခြေကြောင်းလေးပင် မကျန်ခဲ့။
မနှစ်မြို့ဘွယ်ရာ နေရာတွေကို ရောက်တော့လဲ
လဲကြ ကွဲကြ၊ ရှုံ့ကြမဲ့ကြ။
ကတ်ဗူးခွံ သေတ္တာခွံတွေ ဗရပွကြားမှာ
လဲကြ ကွဲကြ၊ ရှုံ့ကြမဲ့ကြ။ ။
ခန္ဓာဆိုတာ အစကတော့ ခန္ဓာ
အရပ်လေးမျက်နှာက လာတဲ့လေနဲ့ တူသလို
လေသန့်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲပစ်တဲ့ ခပ်တိုးတိုး
တစက်စက်ကျလာတဲ့ ကျင်ငယ်ရေနဲ့လည်း တူတယ်။
သူတို့နဖူးပေါ်က ချွေးတွေကို သုတ်ရင်း
ကျုပ်သာ နောက်တကြိမ် အစကနေ ပြန်ချစ်ခွင့်ရခဲ့ရင်….
အလုပ်ထဲမှာ တည်ငြိမ်စွာ အာရုံစိုက်နေသူ နှစ်ဦးရှိတဲ့
ဒီအလုပ်ဟာ သတ္တိရှိဖို့ လိုတယ်။
ဘယ်တော့မှ မရနိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးဘဲ။
ပီတာဆင်၏ ကလိုချင်နဲ့ ထိုသူ
အရူးအမူးဖြစ်မှု အပြည့်ပါတဲ့ ထာဝရတရားတခု
ဒါမှလည်း ဟောဒီလှဲကျင်းမထားတဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ
ဒါ….. ကိုယ်မြင်လိုက်တဲ့ ထာဝရတရားပဲ။
ငြိမ်ငြိမ်လေး လှဲနေတဲ့ လူတယောက်
မနေ့က ရင်ခုန်ခဲ့တာကို ပြန်တွေးနေဆဲ
အဖေနဲ့အမေ နှစ်ယောက်တွဲကတုန်းက ဖွင့်ဖူးတဲ့
မြူးကြွကြွ "ဝေနာဗလတ်" ဓါတ်ပြားကို
၁၂ နှစ်သား ကောင်လေးတယောက်…..။
Posted by Maung Aye Win at 4:31 PM No comments:
အင်တာနေရှင်နယ်သီချင်း ရေးသူ - ကျော်မော်
ရေးသူ - ကျော်မော်
အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းကြီးကို ဆိုနေကြပြီ။ ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာလည်း အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းသံ ဝဲပျံပြီး နေတာမို့ ကျွန်တော်တို့ အကျဉ်းခန်းထဲမှာလည်း ဒီသီချင်းသံ ပြည့်နှက်သွားပစေ ကျွန်တော်တို့ကား သီချင်းဆိုကြသည်။ ၎င်းနောက် တော်လှန်ရေးသီချင်း တပုဒ်ပြီး တပုဒ် ပေါ်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ကား အဖော်ကွဲ၍ မနေလိုကြ။ အမှန်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် အဖော်ကင်းမဲ့နေကြသည်မဟုတ်။ စင်စစ်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကား ယခုအချိန်တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်ရင်း အချုပ်အချယ်မရှိဘဲ သီချင်းဆိုနေရင်းက ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ပင် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူများနှင့် တဂိုဏ်းတည်း တဖွဲ့တည်း ဖြစ်ကြပေသည်။
(ဂျူးလီယက်ဖူးချစ်- ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများစာအုပ်မှ)
ငါ့သားတို့ အင်းစိန်ကို ပြန်အခေါ်မှာ အဝင်ကစပြီး ပုံစံမထိုင်လို့ ဘယ်လိုရိုက်တယ်။ တိုက်ထဲမှာ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး ဘယ်လို ရိုက်တယ်။ အင်တာနေရှင်နယ်ကို ဆိုလို့ ဘယ်လို ရိုက်တယ်ဆိုတာကို ထပ်ကြားရပြန်တယ်။
ကျွန်တော်တို့က အဲဒီ မိုးတွေ လေတွေ ကြားထဲမှာပဲ အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းကို ဆိုပြီး ထောင်ဗူးဝကို သွားကြတယ်။ ကြွေးကြော်သံတွေ တိုင်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဲလိုသွားပြီး တော့ ကြွေးကြော်သံတိုင်၊ ထောင်အာဏာပိုင်တွေကို လက်ညှိုးငေါက်ငေါက် ထိုးခဲ့တာ လေးကြိမ် ရှိသွားပြီ။ အဲလို လေးကြိမ်မြောက် ကြွေးကြော်သံတွေ တိုင်ပြီး ပြန်အလှည့်၊ နောက်ကို ပြန်အလှည့်ဆိုရင်ပဲ တိုက်ပွဲဆောင်ဆီက အင်တာနေရှင်သီချင်းသံ ထပ်တက်လာတယ်။
(ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း- ကျောင်းသား ထောင် တော်လှန်ရေးသမား- စာအုပ်မှ)
ဆုံးစရာ သံကွင်းတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့
တော်လှန်ရေးသမားမှသည် ကဗျာဆရာအထိ သီဆိုခဲ့တဲ့သီချင်း
တကမ္ဘာလုံးက တော်လှန်ရေးသမားတွေ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ သီချင်း
တကမ္ဘာလုံးက အလုပ်သမားတွေ အလေးအမြတ်ထားတဲ့သီချင်း
ကမ္ဘာ့ဘာသာမျိုးစုံဖြင့် ပြန်ဆိုထားသော သန်းရာပေါင်းများစွာသော
အလုပ်သမားများက သီဆိုနေကြသော တိုက်ပွဲခေါ်သံ သီချင်း
ထလော့….. အငတ်ဘေးကျရောက်သူတွေ …
ထလော့…. ကမ္ဘာတဝှမ်းက ကျေးကျွန်တွေ…..
အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းကို ကဗျာအဖြစ် ကဗျာဆရာ၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ တော်လှန်ရေးသမား ယူဂျင်းပေါ်တီယဲ (Eugene Edine Potier) က ရေးသားခဲ့သည်။ ပေါ်တီယဲကို ၁၈၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် ပါရီမြို့၌ မွေးဖွါးခဲ့သည်။
သူသည် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင် "လွတ်လပ်မှုအဓွန့်ရှည်ပါစေ" ဟူသော သီချင်းကို ပထမဆုံး ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။ ၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင် သူသည် ဓနရှင် လူတန်းစားအား တိုက်ခိုက်သော အလုပ်သမားများ၏ မဟာတိုက်ပွဲကြီး ပါရီဘုံအဖွဲ့၏ ကတုတ်ကျင်းများထဲတွင် တပ်သားတဦး ဖြစ်နေသည်။
ပေါ်တီယဲမှာ ဆင်းရဲသော မိသားစုက ပေါက်ဖွါးလာသူ ဖြစ်ပြီး ဘဝတလျှောက်လုံး ဆင်းရဲသား ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းထုပ်ပိုးသူ၊ နောက်ပိုင်းတွင် အထည်စက်ရုံ အလုပ်သမားအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုခဲ့သည်။ ၁၈၄၀ ခုနှစ်မှ စ၍ ပြင်သစ်အရေးတော်ပုံတိုင်းတွင် အလုပ်သမားကို သွေးစည်းရန် ပြင်သစ်ဓနရှင် အစိုးရကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန် တိုက်ခိုက်ရန် လှုံ့ ဆော်သည့် တက်ကြွသော တေးသီချင်းများ စပ်ဆိုခဲ့သည်။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၈၇၀ ပါရီဘုံအဖွဲ့တွင် ဘုံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည်။ ပေးမဲ ၃၆၀၀ အနက် သူက ၃၃၅၂ မဲရသည်။ သူသည် သမိုင်းတွင် ပထမဆုံးသော ပစ္စည်းမဲ့ လူတန်းအဖြစ် အစိုးရဖြစ်သည့် ဘုံအဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှု အားလုံးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ပါရီဘုံအဖွဲ့ ကျဆေုံးသောအခါ ပေါ်တီယဲမှာ အင်္ဂလန်သို့ ထွက်ပြေးရသည်။ ၎င်းနောက် အမေရိကန်သို့ ထွက်သွားရသည်။ သူသည် အင်တာနေရှင်နယ်ကဗျာကို ၁၈၇၁ ဇွန်လတွင် ရေးစပ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မေလ၏ သွေးစွန်းသော ရှုံးနိမ့်မှုကြီး ပြီးသည့်နောက် တလအကြာတွင် ဖြစ်သည်။ ပြည်ပတွင် တိမ်းရှောင်ရင်း အလုပ်သမား ကဗျာများစွာကို ရေးသားခဲ့သည်။ ဘုံအဖွဲ့ ကျဆုံးပြီး ကိုးနှစ်အကြာတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံကို ပြန်လာခဲ့သည်။ အလုပ်သမားပါတီထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၈၈၄ ခုနှစ်တွင် ပထမကဗျာစာအုပ်၊ ၁၈၈၇ ခုနှစ်တွင် "တော်လှန်တေးများ" ဒုတိယကဗျာ စာအုပ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။၁၈၈၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပေါ်တီယဲ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့တော် ပဲလာရှဲသုသန်တွင် မြှပ်နှံခဲ့သည်။
ယူဂျင်းပေါ်တီယဲ ရေးစပ်သော အင်တာနေရှင်နယ် ကဗျာကို ၁၇ နှစ်အကြာတွင် သီချင်းအဖြစ် အသံသွင်းခဲ့သူမှာ အလုပ်သမားသီချင်းရေးဆရာ ဖြဲဒီဂေးတာ (Pierre De Geyter) ဖြစ်သည်။ ဖြဲဒီဂေးတာမှာ ဂီတပညာရှင် မဟုတ်ဘဲ သေတ္တာလုပ်သည့် အလုပ်သမားတယောက်သာ ဖြစ်သည်။ သူ့အဖေမှာ အလုပ်သမား ဖြစ်၍ သူလည်း ၇ နှစ်သားမှစ၍ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသည်။ ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမန် စစ်ဖြစ်သောအခါ ပြင်သစ်တပ်တွင် ဝင်၍ အမှုထမ်းပြီး စစ်ထဲ၌ ရှိနေစဉ် အလုပ်သမား လူတန်းစားဘဝကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး စစ်ပြီးချိန်တွင် အလုပ်သမား လှုပ်ရှားမှု များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အလုပ်သမားသီချင်းများ ရေးခဲ့သည်။ ဖြဲဒီဂေးတားသည် ယူဂျင်းပေါ်တီယဲ စပ်ဆိုခဲ့သည့် လုပ်သားထု နိုးကြားထကြွရေး ကဗျာများနှင့် ထိတွေ့မိသည်။ ဤတွင် ပေါ်တီယဲ စပ်သည့် ကဗျာတပုဒ်မှ စာသားများကို ယူပြီး ဖြဲက ကမ္ဘာ့အလုပ်သမား များ၏ ကမ္ဘာသုံးသီချင်းဖြစ်နေသော အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းကို အသံသွင်း တေးသီပေး ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၁၈၈၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ ပြင်သစ်ပြည် လီလဲမြို့ အလုပ်သမားပွဲတော်၌ စတင် သီဆို ခဲ့သည်။ သီဆိုခဲ့ကြစဉ်က နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားသီချင်း ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု မည်သူမျှ ထင်မထားခဲ့ကြပေ။
၁၈၉၄ ခုနှစ်တွင် အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းကို စာသားရော တေးသွားပါ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ လိုက်ရာ လီလဲ အရင်းရှင်များက သူပုန်စော် နံသည်ဟုဆို၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူကို ဖမ်းပြီး တရားစွဲသည်။ သီချင်းကို လူထဲ မသီဆိုရဟု တားမြစ်ပိတ်ပင်သည်။ သို့သော် သီချင်းမှာ လူကြိုက်များ၍ ပြင်သစ်ပြည် အနှံ့အပြားရှိ အလုပ်သမားရပ်ကွက်များတွင် သီဆိုခဲ့ကြ လေသည်။ ၂ နှစ်အကြာတွင် ပြင်သစ်အလုပ်သမားပါတီ ကွန်ဂရက် ကျင်းပသဖြင့် ကွန်ဂရက် ကိုယ်စားလှယ်များက အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းကို သူတို့နှင့်အတူ ကွန်ဂရက်အပြန်တွင် သယ်ယူသွားကြသဖြင့် ပြင်သစ်တပြည်လုံးတွင် သီဆိုခဲ့ကြလေတော့သည်။
ထို့နောက် ပြင်သစ်ပြည် အပြင်ဘက်သို့ ရောက်သွားပြီး ဥရောပ နိုင်ငံတကာ၌ ကိုယ့်ဘာသာ စကား ကိုယ်သွင်းပြီး သီဆိုခဲ့ကြသည်။ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် လီနင်ထုတ်ဝေသည့် မီးပွါး သတင်းစာ၌ ဤသီချင်းကို ပထဆုံးအကြိမ် ပုံနှိပ်ဖော်ပြလိုက်သည်။ ၂ နှစ်ကြာသည့်အခါ ရုရှား တော်လှန်ရေးသမားတဦး ဖြစ်သည့် အာကာဒီကော့ ဆိုသူက ရုရှားဘာသာစကားသွင်းပြီး ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ် သတင်းစာ၌ ဖော်ပြသည်။
၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ၏ ပထမဆုံး ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံဖြစ်သော ဆိုဗီယက်ယူနီယံက အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းကို သူတို့၏ အမျိုးသားသီချင်းအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ သီချင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပြန်သည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ် အတွင်း၌ စစ်မျက်နှာတိုင်းတွင် အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းကို သီဆို၍ ဖက်ဆစ်များကို တိုက်ခဲ့ကြသည်။ အကျဉ်းထောင်များ၌ ဤသီချင်းကို ကြံ့ကြံ့ခဲကြ တော်လှန်ကြလေသည်။
အင်တာနေရှင်နယ်သီချင်းကို ကမ္ဘာ့ဘာသာစကား မျိုးစုံဖြင့် ဘာသာပြန်ပြီး သီဆိုခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားများသည် မိမိတို့ ရှေ့မှ သွားနှင့်သော တိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်း ပစ္စည်းမဲ့ ကဗျာဆရာ၏ သီချင်းကဗျာကို ကမ္ဘာ့အလုပ်သမား အများစု၏ သီချင်းကြီးအဖြစ် ခံယူခဲ့ကြသည်။
လူတန်းစား အသိရှိသော အလုပ်သမားတဦးကို မိမိဇာတိမြေက ကွာလှမ်းသည့် မည်သည့်နေရာကိုပဲ ရောက်ရောက်၊ မည်သည့် ကံကြမ္မာမျိုးနှင့် ကြုံရ ကြုံရ၊ မည်မျှပင် သူစိမ်းတရံလို ခံစားနေရသည် ဖြစ်စေ အင်တာနေရှင်နယ်သီချင်း၏ သံပြိုင်အပိုဒ်မှတဆင့် ရဲဘော်တွေ မိတ်ဆွေတွေ ရှာတွေ့နိုင်သည်။ ငတ်ပြတ်နေသူများ၊ ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် ဖိနှိပ်ခံရသူများ၊ ငုံ့မခံနေကြနှင့်၊ ထလော့ နိုးကြားလော့ ဘဝတူချင်း လက်တွဲလော့ အလုပ်သမားတွေ သွေးစည်းပြီး တိုက်ပွဲဝင်လော့။ လောကသစ်ကို ထူထောင်လေ.. ဟူသော စာသားများကို ဂီတဖြင့် သီကုံးထားသော အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းသည် ပစ္စည်းမဲ့ လူတန်းစားများ၏ မကွယ်မပျောက်နိုင်သော တိုက်ပွဲဝင်သီချင်းကြီး ဖြစ်လာတော့သည်။ ကမ္ဘာ့ အလုပ်သမား ပြည်သူတွေကို လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းရန် တော်လှန်ရေးကို အဆုံးတိုင် ဆင်နွှဲရန် အားသစ်လောင်းပေးခဲ့သော အတွေးအခေါ် စာသားများသည် ကမ္ဘာတဝန်းလုံးတွင် ပြန့်နှံ့နေခဲ့သည်။ အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းသံသည် ကမ္ဘာ့လေထုထဲ တွင် ယခုတိုင် လွင့်ပျံလျက် ရှိနေသည်။
ထလော့.. အငတ်ဘေး ကျရောက်သူတွေ
ထလော့… ကမ္ဘာတဝှမ်းက ကျေးကျွန်တွေ
ရှေးရိုးအစဉ်အလာ အယူအဆဟောင်းတွေ စွန့်လေ
ကျေးကျွန်တွေ ထလေ.. ထကြလေ…
အခြေအနေတွေ ဒို့တော်လှန်ကာ ပြောင်းမလေ
(သံပြိုင်) ရဲဘော်တို့လာ စုရုံးလေ
အင်တာနေရှင်နယ် ကမ္ဘာမှာ အကုန်ညီစေ….။
အင်တာ နေရှင်းနယ် စည်းရုံးစုစည်းကာနေ။
ကယ်တင်ရှင် ဘယ်သောအခါမှ မရှိပေ
နတ်သိကြား မင်းဘုရား ဒို့မယုံပေ
နှောင်ကြိုးကို ဒို့လက်ရုံးနဲ့ ချိုးဖျက်မလေ
သောက ဗျာပါဒ လောဘ ကင်းစင်စေ..။
လုယက်ခြင်းမှ မှန်မလွဲပင် ကင်းမလေ
အများပြည်သူ တူညီ ပျော်မြူးကြစေ
အားလုံးက တာဝန်ကိုယ်စီ ထမ်းမလေ
အင်တာ နေးရှင်းနယ် စည်းရုံးစုစည်းကာနေ။
လယ်သမား လုပ်အားစိုက်ထုတ်သူ အပေါင်းတွေ
ညီရင်းပမာ သစ္စာအဓိဌာန် ပြုစို့ဟေ
ကြောက်လန့်စိတ်တွေ အကုန်အစင် စွန့်လေ
အာရုဏ်ကျင်းကာ အလင်းသို့ ရောက်ပြီဟေယယ။
[မူလဆုံမှတ်-အနုပညာအယ်လ်ဘမ် အမှတ်(၁) မှ ကူးယူဖော်ပြပေးပါတယ်။]
Posted by Maung Aye Win at 6:05 PM No comments:
မြို့ပြကန္တာရထဲက ကဗျာစမ်းရေကြည် ဘာသာပြန်သူ- နေဦးဝေ
ရှိစုမဲ့စု အရှေ့အရပ် ရေးသူ - မောရူးဆိုး